दक्षिण एसिया र तालिबानबारे कसरी प्रस्तुत होलान् बाइडन ? - Kohalpur Trends
१२ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले पदभार सम्हालेसँगै अब अमेरिकाको नीति विश्वभर कस्तो रहला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । के बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकाले दक्षिण एसियाप्रतिको नीति फेर्ला त ? एशियाली मुलुकहरुमा यसबारे चासो बढेको छ ।
Previous Previous post: ६ घन्टासम्म रोकिएकाे महिलाको मुटु फेरी चल्न थालेपछि…
Next Next post: पीएम कपमा समूह चरणका अन्तिम खेल आज, आर्मी र एपीएफ तथा पुलिस र प्रदेश २ खेल्दै